सुरक्षित रहेर तिहार पर्व मनाऔं – Dainik Lumbini
सुरक्षित रहेर तिहार पर्व मनाऔं
हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहार पर्व आज शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । तिहार पर्वको पहिलो दिन आज काग तिहार हो । आजको दिनमा कागको पूजा गरी मिठो–मिठो खान दिने चलन छ । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मकाअनुसार कागलाई यमदुतका रूपमा समेत मानिन्छ । कागले कतिपय रोगका कारक तत्व मानिएका फोहोरलाई आफूले खाएर वरपरको वातावरण सफा, सुग्घर तुल्याइदिन्छ र मानिसको भलो गरिरहेको हुन्छ ।
तिहार पर्वको दोस्रो दिन कुकुरको पूजा हुन्छ । यमलोकका द्वारमा बस्ने र भैरवका बाहन पनि भएकाले कुकुर पुजेको मानिन्छ । कुकुर भनेको घर परिवारको रखवारी गर्ने संरक्षक एवं इमान्दार प्राणी हो । यमपञ्चकको तेस्रो दिन लक्ष्मीपूजा र गाईतिहार मनाइन्छ । यस दिन गाईलाई गौमाता मानेर र लक्ष्मीलाई धनधान्यकी देवी मानेर पूजा गरिन्छ । यस दिन गाईलाई माला लगाएर दूधले छाप लगाई सिंगारिन्छ । यमपञ्चकको चौथो दिन गोवर्धन पूजा मनाइन्छ । हिन्दू नेपालीहरुले आ–आफ्नो घर आँगनमा गाईको गोबर र रातोमाटोले लिपपोत गरी गोवर्धन पर्वतको आकृति बनाइ पूजा गर्ने प्रचलन छ । तिहारको अन्तिम दिन भने भाइटीका रहेको हुन्छ । यस दिनलाई विशेष उत्साहका साथ मनाउने प्रचलन छ । यस दिन दिदीबहिनी र दाजुभाइले विशेष मान सम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने, मीठा–मीठा खाने कुरा खाने परम्परा छ ।
तिहारलाई उज्यालोको पर्वका रुपमा समेत चिनिन्छ । लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि घरघरमा दीपावली गरी झिलिमिली बनाउने परम्परा छ । यद्यपि आजभोलि तिहार सुरु हुनुभन्दा दुई चार दिन अघि नै झिलिमिली पार्न थालिएको छ । प्राकृतिक रुपमै पनि सयपत्री, मखमली, थुंगेफुल र गोदाबरी जस्ता आकर्षक फुलहरु फूल्ने समयमा तिहार पर्व पर्ने भएकाले वातावरण हेर्दै मनोमहक र चमक देखिन्छ । वास्तवमा तिहार फूलहरुको पर्व हो भन्दा पनि फरक पर्र्दैन ।
यस वर्षको भाइटीकाको साइत मंसिर १ गते बिहान ११.३७ बजेमा टीका लगाउनु उत्तम हुने नेपाल पञ्चायङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । यद्यपि सो दिन दिनभर पनि टीका लगाउन कुनै बाधा हुने छैन । मंसिर महिनामा भाइटीका परेकाले दाइलाई टिका लगाउनु हुन्न भनी केही मानिसले चर्चा गरे पनि त्यो शास्त्रसम्मत नरहेको समितिले जनाएको छ ।
तिहार पर्व हर्षाेल्लासपूर्वक देउसी भैलो खेल्दै, मीठा–मीठा परिकार खादैै मनाइने भए पनि यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै सतर्कताका साथ मनाउनुपर्ने भएको छ । देउसी भैलो खेल्दा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहन्छ । किनकि कोरोना संक्रमण कसलाई छ वा छैन भन्ने कुुरा सहज थाहा पाउन सकिदैन । त्यसैले यस पटकको तिहार पर्व पारिवारिक रमाइलोमै सीमित गरेर मनाउन आवश्यक छ ।
कम्तीमा पर्वहरु कोरोना संक्रमण गराउने ‘हट स्पट’ नबनुन् भनेर सबैले ख्याल गर्न जरुरी छ । हर्ष मनाइरहँदा भविष्यमा आइपर्ने महामारीको ख्याल गर्न चुकियो भने सचेत नागरिक हुनुको दायित्व भुलेको ठहरिने छ । त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाको सावधानीसहित तिहार पर्व मनाऔं । हाम्रा कारणले छरछिमेक र समाजले दुःख पाउने अवस्था आउन नदेऔं । कोरोना केही पनि होइन भने नसोचौं तर कोरोनाकै त्रासले तिहार पर्व खल्लो पनि नबनाऔं । यस वर्षको तिहार पर्वले सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई कोरोना पराजित गर्न आत्मबल प्रदान गरोस्, सबैमा हार्दिक शुभकामना !
किन घटिरहेछ सावधानी ?
विश्वदृष्टि दिवस र आँखाको महत्व